Ulwazi lwezothutho lasePhoenix luza kwiiMephu zeApple | Ndisuka mac
I-Apple Maps ikhuphe ulwazi lwezothutho lwendawo yasePhoenix eArizona naseBirmingham eAlabama, le yenye yeendawo ezimbalwa ezingagutyungelwanga yimephu ka-Apple kunye nenkonzo yokuhamba ngolwazi ngokweenkonzo zikawonke-wonke zeApple.
Ngokubhekisele kwindawo yasePhoenix, ngoku siyalazi ixesha eliza kuthatha ukufikelela kwindawo esiya kuyo, ukuba kufuneka sisebenzise I-Valley Metro okanye i-PHX Sky Train. Ulwazi olunxulumene nokuya kwisikhululo senqwelomoya sasePhoenix Sky Harbor, usebenzisa iindlela ezikhoyo zokufikelela ziyafumaneka. Kodwa ayisiyiyo kuphela i-nucleus yedolophu ebandakanyiweyo kolu hlaziyo lweeMaphu zeApple. Amadlelo, kubandakanya iChandler, iMesa, iGlendale, iScottsdale kunye neTempe.
Ukuba usebenzisa izithuthi zikawonke-wonke eBirmingham, sinokwazi amaxesha okuhamba kwaye sicwangcise ukuhamba kwethu, kunye Iibhasi ze-MAX. Iidolophu ezikufutshane zinendawo yazo enje nge: Montgomery kunye neHuntsville, ukukwazi ukufikelela kuzo kwiziko okanye ukuphuma kuzo.
I-Apple Maps inyanzelekile kwezo ndawo zinokuthunyelwa kancinci. Sithetha ngeDenmark, iSweden, iNorway, iFinland, i-Estonia, iLatvia neLithuania. Eli nqaku lisandula ukwaziswa kwiindawo ezinje nge: Las Vegas, Ottawa, Paris, Rome, Madrid, Taiwan kunye ne Singapore.
Abanye abasebenzisi beApple baqikelela ukuba zeziphi izixeko eziza kubamba ulwazi lwezothutho lukawonkewonke kungekudala. Oku kubonisa ukuba kukho ipateni eqhelekileyo: xa iApple yongeza ulwazi kwizikhululo ezikwindawo ethile, ngaphakathi kweeveki ezimbalwa loo ndawo ikhupha ulwazi kuthutho lukawonkewonke
Siyathemba ukuba ukuphunyezwa kwenkonzo kuya kukhawulezisa, ukuba nenxalenye enkulu yeendawo ezigutyungelweyo, kwihlabathi liphela. Kuyinyani ukuba ulwazi kwiiwebhusayithi luphelele kwaye akusoloko kuyimfuneko ukubonisana neApple Maps. Kodwa ayonzakalisi ukuba nalo lonke ulwazi oluhlanganisiweyo kwisicelo seMaphu yeApple kwaye usebenzise ithuba le-Apple ecosystem yezinye izinto kwaye phakathi kwabo, kwixa elizayo, kunye nobukrelekrele bokuzenzela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ulwazi lwezothutho lasePhoenix luza kwiiMephu zeApple